🥇 ▷ Qualcomm iyo Apple waxay ka shaqeynayaan faro-farta loogu talagalay iPhone ✅
Qualcomm iyo Apple waxay ka shaqeynayaan faro-farta loogu talagalay iPhone
Inta badan soosaarayaasha taleefannada casriga ah ee Android-ka ayaa durba soo saaray shaybaarro sawir-gacmeed cusub oo shaashadda ah. Samsung waxay soo bandhigtay qalabkii ugu horreeyay adduunka ee leh sawirka faraha faraha ee ultrasonic oo leh saxsanaan kor u kacay. Halka iPhone ka Apple uu wali sugayo jiilka xiga ee dareemayaasha faraha ee shaashadda.
Waxay umuuqataa in mudadii sugitaanku ay soo gabagabowday kadib markii Apple iyo Qualcomm ay ku biireen ciidammo si ay uga hirgeliyaan qalabka wax lagu sawirayo faraha ee iPhone-ka cusub, silsiladda warshadaha ayaa sidaas yidhi. Teknolojiyad la mid ah Ultrasonic Sensor Galaxy S10, ayaa ku jirta horumarin loogu talagalay iPhone. Sida had iyo jeer, Apple waxay si aan kala go ‘lahayn ula shaqeysaa Qualcomm si ay u bixiso sawirka sawirka faraha ee ugu fiican iPhone mustaqbalka.
Dareemayaasha Ultrasonic ee shaashadda waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo dhakhso badan, badbaado leh oo ay si sax ah ugu shaqeeyaan xitaa jawiga qoyan. Marka loo barbardhigo dareemayaasha indhaha, waxay ku furi karaan aaladda 250 ms waxayna leeyihiin saamiga ugu badan oo ah 1%. Si ka duwan 300 oo dareemayaal nafaqeeyayaalka yar ah, dareemayaasha qarniga labaad ee Qualcomm waxay u shaqeyn karaan si hufan illaa 800 micron.
In kasta oo ay jiraan guulahan, dhowr jeer tani kuma guuleysan markii isticmaaleygu isku dayay inuu furayo aaladda isagoo adeegsanaya mashiinka sawirka faraha 3D daabacan. Waxay hadda u nugul tahay qaabab furitaan aan la xaqiijin. Apple waa inay ka adkaataa qaladaadkan ka jira jiilka ‘jiilka labaad ee qalabka sawirka faraha ee’ Qualcomm ‘faraha kahor inta uusan ku wareejin iPhone-ka cusub.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Qualcomm iyo Apple waxay joojinayaan dhammaan dacwadaha; Intel wuxuu ka baxayaa meheradda casriga ah ee 5G
Baahida loo qabo kor u qaadista tayada daawashada waxay horseedaysaa daahyo khafiif ah iyo dareemayaasha faraha ee shaashadda ku yaal. Sida lagu sheegay warbixin cilmi baaris oo lagu sameeyay IHS Markit, sanadkaan suuqa taleefanka gacmeedka faraha ayaa gaari doona 100 milyan.